China Steel Fitness Equipment Arc welding robhoti Mugadziri uye Mutengesi |Yunhua
Best mutengesi Robot yeYooheart.
-Kureba kweruoko: 1450mm
-Torch: Gasi kutonhora torch ye350A ikozvino
-Kuri nyore kudzidza uye kushanda
Iyo robhoti inonyanya kushandiswaarc welding, nekuvimbika kwepamusoro uye kukosha kwakanakisa kwemari.Welding robhoti hollow zvimiro maoko nemaoko, welding robhoti yakavakirwa-mukati welding tambo, inokwanisa kushandisa welding maitiro munzvimbo yakamanikana, yakareruka, compact chimiro.
Welding robhoti nekuisa chivharo chekudzivirira, unogona kuzorora uine chokwadi chekuti inogona kushandiswa munzvimbo dzakasiyana siyana dzakaoma (guruva uye kudonha).Welding robhoti hombe nzvimbo yekushanda, welding robhoti inokurumidza kumhanya, welding robhoti yakakwira inodzokorora chinzvimbo, yakakodzera mhando inoda welding application.
Q. Ko Mig welding robhoti inogona kushandiswa Aluminium welding?
A. Mig welding robhoti inogona kushandiswa kuCarbon simbi, simbi isina tsvina, Aluminium welding.Musiyano ndewe robhoti ichagadzira akasiyana welder kusangana nezvinhu zvakasiyana.
Q. Inogona here Mig welding robhoti kubatanidza imwe brand welder?
A. Mig welding robhoti inogona kubatanidza mhando dzakasiyana-siyana welder seOTC, Lincoln, Aotai, Megmeet etc. Megmeet & Aotai ndiyo mhando yedu yekubatana, kuitira kuti zvose zvepakutanga zvakabatanidzwa welder ndeyeMegmeet / Aotai.Vatengi vanozviita vega kana vachida imwe brand welder.
Q. Inogona here Mig welding robhoti kubatanidza ekunze axis?
A. Mig welding robhoti inogona kubatanidza ekunze axis.3 mamwe ekunze axis anogona kubatanidzwa uye aya axise anogona synergy nerobhoti.Yakawanda axis inogona kubatanidzwa kuburikidza nePLC, robhoti inovadzora kuburikidza nekutumira uye kugamuchira masaini kuburikidza neI / O board.
Q. zviri nyore here kudzidza marobhoti ekuronga?
A.zviri nyore kwazvo kudzidza, zvinongoda 3 ~ 5 mazuva, mushandi mutsva anogona kuziva kuronga marobhoti.
Q. Unogona here kupa yakakwana Mig welding mhinduro?
A. kana iwe uchigona kupa ruzivo nezve chidimbu chebasa, Tekinoroji yedu inogona kugadzira mhinduro dzakakwana kwauri.Isu tichachaja 1000 USD yega yega mhinduro dhizaini.
Zvakapfuura: 6 axis Mig welding robhoti yekuchengetedza rack
Zvinotevera: Factory Cheap China Carbon Steel Sheet Metal Fabrication plasma yekucheka Robot
yakanaka mhando cnc indasitiri robhoti
low cost welding robhoti